जसपाले एमाले बाट केहि सिक्ने, पार्टी जोगाउने कि पार्टी फुटाउन केहि कसर बाकि नराख्ने – Sanghiya Online
Posted on : June 15, 2021 - No Comment
१ असार, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित ४ जना नेतालाई गरेको कारबाहीलाई मान्यता नदिने निर्णयले निर्वाचन आयोगको तटस्थता र निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठेको बताएका छन् । तर त्यो निर्णय लाइ यादबले जसपा जोड्ने एउटा मौकाको रुपमा लिन सकेन । उहाँ झन्डै फुटिसकेको पार्टिलाइ एक चोटि निर्वाचन आयोगको निर्णयले फेरी पार्टीलाई एक ढिक्का गर्ने अवशर भएको बुझेर छलफल तिर लाग्नु पर्थ्यो तर त्यो गर्नु भएन। हुन् सक्छ उहामा मेरो कुरा नसून्ने संग बस्दिन बरु पार्टी फ़ुटाउछु भन्ने सोच पलाएको होला । आयोगको निर्णय आएको कम्तिमा २-४ दिन त छलफल गर्नेपर्छ । तर यादबले त्यसो गर्न उचित ठान्नु भएन । आज मात्र विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले राजनीतिक दलको बहुमतको निर्णय मान्य हुने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, विधि र पद्धतिको सम्पूर्ण रुपले अवज्ञा, उपेक्षा र तिरस्कार गरिएको भन्दै आयोगको निर्णयप्रति विरोध जनाएका छन् ।
निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकाय पूर्वाग्रहरहित भई निष्पक्ष र तटस्थ ढंगबाट निर्णय गर्नुपर्नेमा एकपक्षीय हित अनुरुप गरेको उक्त निर्णय मान्य हुन सक्दैन र यसले निर्वाचन आयोगको तटस्थता र निष्पक्षामाथि नै गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ’ यादवले भनेका छन् । भनेपछि पार्टीका पहिलो अध्यक्षले गरेको निर्णय पनि गलत, बरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले गर्नु भएको वा बोलेको क्रियाकलाप पनि गलत, लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरु पनि गलत, सर्बोच्चले लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरुलाई यादबले चुपचाप कारवाही गर्नुभयो र सर्बोच्चले फेरी उनीहरुका पद पुनर्स्थापित गरिदिए त्यो पनि गलत, हुँदा हुँदै निर्वाचन आयोग पनि गलत । यसलाई म केहि भन्न चाहनन् उहाँ कै नैतिकता माथि प्रश्न उठेको छ ।
यादवले जेठ १७ गते जसपाको कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई निष्कासनको निर्णय गरी निर्वाचन आयोगमा रहेको दर्ता किताब सच्याउन पत्र दिएका थिए । यो विवादमा जेठ ३० गते निर्णय गर्दै निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षले गरेको निष्कासनको कारबाही अमान्य हुने निर्णय गरेको थियो । यादवले कार्यकारिणी समितिको बहुमतले निर्णय गर्दा पनि अस्वीकार गरिएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । उहाँको आजको होइन १५ बर्ष देखि पटक पटक पार्टी फुटेको छ । त्यसको एउटै कारण हो कसैले केहि गर्यो, फरक मत राख्यो त्यसको जवाफमा यादब भन्छन – कारवाही गर्नुपर्छ। पूर्ब समाजबादीका १ वा २ होइन कैयौ नेता छन् जसले स्वीकारेका छन् कि यादबको कमजोरी नै त्यहि हो । उहाँले कसैले फरक मत राख्यो भने त्यसलाई इगोको रुपमा लिनु हुन्छ । समाजबादी निकट एक जना पत्रकारले भन्नु हुन्छ – नेपाल पत्रकार महासंग को चुनाबमा पर्सा जिल्लामा हाम्रा संगठनका केहि पत्रकारहरु हाम्रै बिरोधमा उत्रेका थिए । हामि अध्यक्ष जी कहा पर्साको अध्यक्षलाइ भनेर ति पत्रकारहरुलाई सम्झाउनु पर्यो भनेर कुरा राख्यौ तर अध्यक्ष जीले एकै चोटिमा भन्नुभयो -” सम्झाउनु पर्दैन कारवाही गरेर पार्टी बाट ति पत्रकारहरुलाई निस्काशन गर्नुस।” ति पत्रकार अहीले पनि उपेन्द्र खेमा तिरै छन् ।
यादवले निर्वाचन आयोगको निर्णयबाट पार्टीमा अनुशासनहीनता बढ्ने बताएका छन् । निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ र जसपा नेपालको अन्तरिम विधान २०७७ लाई आफ्नो सुविधाअनुसार बंग्याई अपब्याख्या गरी पार्टी विधान विपरीत काम गर्ने, दलको आचारसंहिता पालना नगर्ने, अराजक एवं अनुशासनहीन पदाधिकारी र कार्यकारिणी सदस्यलाई परोक्ष रुपमा वैधानिकता दिन खोजिएको जस्तो देखिन्छ, जुन कार्य विधिसम्मत देखिँदैन विज्ञप्तिमा भनेका छन् । यसले के देखाउछ भने – उहाँको पक्षमा निर्णय यो आउनु पर्थ्यो कि ठिक छ तपाइँ पार्टी फ़ुटाउनुस तपाइँलाइ बधाई छ । सप्तरीका एकजना केन्दिय नेताले स्वीकार्दै भन्नुभयो- अध्यक्ष जी को इगो समस्या नै खतरनाक छ न भए उहाको सबै पक्ष ठिक छ । एक जना प्रदेश सभा सांसदले भने – हामि लाइ थाहा छ उहाँको समस्या तै पनि हामि सहेर बसेका छौ ।
यादवले आयोगको निर्णयविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी उपचार खोज्ने बताउनु भएको छ । गत बर्ष प्रतिनिधि सभा सांसद प्रदीप यादब, उपाध्यक्ष रेणु यादब लगायत ११ जना सांसदहरु पार्टी फुटाएर तत्कालिन नेकपामा जान तयार भएका थिए । त्यति बेला तिनै सांसदहरुले संघिय अनलाइन संग कुराकानी गर्दै भनेका थिए – हामीलाई अध्यक्ष यादबले सार्है हेपेका छन् । कुराकानी समेत गर्दैनन् । त्यस्तो पार्टीमा के बस्नु ? यसले यादबको छबि कस्तो खालको हो झल्काई रहेको छ । ‘निर्वाचन आयोगको उपरोक्त काम कारबाहीविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी उपचारका लागि लडाईं जारी रहनेसमेत जानकारी गराउछौं’ यादवले भनेका छन् । त्यो लडाइ भनेको पार्टी नफ़ुटे सम्म म चैनले बस्दिन भनेको हो भने मधेश र मधेशी शहिद र शहिद परिवार प्रति यादबको कुनै काम र कर्तब्य नभएको बुझिन्छ । अन्तमा उहालाई मधेशीले दिएको म्याण्डेटलाइ सम्झेर पार्टी एकता गर्न लचकता अपनाउन अनुरोध छ l
नेकपा एमालेमा माधब नेपाल र प्रधानमन्त्री ओली भन्दा ठूलो लडाइ त जसपामा छैननी । केपीको गुट भन्दा माधब गुट धेरै सानो छ । तै पनि माधब नेपाल गुट फुट्न मानेका छैनन् र ओली फकाउन छाडेका छैनन् । त्यसको कारणको लचकता । उपेन्द्र यादब ज्यु केहि सिक्ने कि ?
परिवर्तनलाई राेक्न खाेज्नु भनेकाे भाेलीलाई राेक्नु जस्तै हाे, जाे असम्भव छ !